Iphupha nge-Shot ▷ Discover Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngethamsanqa, siva umpu ngokufuthi ngokwenyani kunakwithelevishini okanye kwiimuvi. Bambalwa kakhulu abantu abanemipu okanye iimbumbulu okanye abakhe badubula. Kwimeko apho amagosa asebupoliseni kunye nabazingeli besebenzisa isixhobo kunye nokuqhelisela ukudubula nayo kuyinxalenye yobomi bemihla ngemihla.
Nangona kunjalo, njengophawu lwephupha, ifoto ingafumana indlela yayo kwi-adventure yomntu ngamnye yasebusuku. Ngamanye amaxesha siva enye apha, mhlawumbi siyazidubula, mhlawumbi kwisithuba, mhlawumbi isilwanyana, mhlawumbi nomntu.
Iimeko zokuphupha apho sidutyulwa khona okanye sizidubule ngokwethu zinokoyikisa ngakumbi. Zonke ezi meko mazisoloko zithathelwa ingqalelo xa kutolikwa uphawu "lokudubula".
1 Uphawu lwephupha «ukudubula» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukudubula» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukudubula» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukudubula» - ukutolikwa ngokubanzi
Yiva umpu unakho ephupheni amava angathandekiyo ukwazisa. Umntu ochaphazelekayo kungekudala anganamava angazokuwathanda. Ingakwenza ube lusizi kakhulu kwaye ikuthwale okwethutyana. Nangona kunjalo, ukuba ukudubula ephupheni akuvuseli uloyiko, ukukhathazeka okanye ukuphakuzela kumntu ochaphazelekayo, uphawu kufuneka luqondwe njengesiqhelo esihle: kule meko, ngokoluvo ngokubanzi, uya kuthandana ngokungalindelekanga.
Ukuba iphupha lidubule ixhoba ngokwakhe, oku kunokuba kwakhe Yintlungu phambi kwabantu abanobutshaba. Oku kunokuhamba nokuzithemba okuphantsi. Ukulala ngokukhawuleza kuyaphazamiseka, ngakumbi kwimeko zongquzulwano. Inokuzimela ngobunzima kuphela, kwaye ke ayizilindi kumaqhinga anobutshaba.
Iphupha apho uhlasela ngompu kwaye udubule umntu unokuba ukungalingani kwangaphakathi Bonisa. Umntu ekuthethwa ngaye unobunzima ekwamkeleni zonke iinxalenye zobuntu bakhe. Uzama ukuphelisa iinkalo ezithile zakhe okanye ukuzicinezela amandla.
Nangona kunjalo, ukuba ujoliso lwephupha lokudubula sisilwanyana, uphawu luyakukhuthaza ukuba utyale amandla ngakumbi kunye namandla kumcimbi othile. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba isilwanyana silahlekile ephupheni.
Uphawu lwephupha «ukudubula» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwendlela yokutolika kwengqondo, ukudubula ephupheni kunokuba kuko iimvakalelo ezibuhlungu kuba. Kungenzeka ukuba umntu ekuthethwa ngaye udanile kakhulu kubomi bokwenyani kwaye akakayilungisi ngokupheleleyo le nto abe nayo. Kwiphupha labasetyhini, le ntsingiselo inokubhekisa kumava ezesondo.
Ukuba inye kuphela ifoto eviweyo ephupheni, ii-psychoanalysts zibona apha zibonisa a isigqiboizakuthathwa kwixa elizayo. Oku kuya kubaluleka kakhulu kwaye kunokutshintsha ubomi bakho bonke. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba ujonge ngononophelo iimpikiswano ezininzi kuqala.
Uphawu lwephupha «ukudubula» - ukutolika kokomoya
Kwinkcazo yamaphupha okomoya, umpu umele amandla alawulwayoukuba iqela elinomdla lifuna ukukhula kwakhe ngokomoya.